Taageerada Xisbiga S oo Hoos u Dhacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Taageerada Xisbiga S oo Hoos u Dhacday
La daabacay måndag 17 oktober 2011 kl 09.03
Taageerada xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga (S) ayaa hoos u dhacday sida ku cad baaritaanka hayadda Sifo oo su'aalo weydiisay bulshada muddo laba toddobaad ah bishan oktoobar, iyadoona toddobaadkii dambe uu soo caan-baxay fadexaddii dhaqaalaha taageerada deegaanka ee Håkan Juholt.
Xisbiga S ayaa toddobaadkii hore ee labadaa toddobaad ay taageeradiisu gaarsiisnayd 35%, halka uu toddobaadkii dambe hoos u dhacay gaarayna 26,9. Isku celcelin wuxuu xisbiga S helay 30,3%, wuxuuna hoos u dhacay 1,3 laga soo bilaabo septeembar.
Xisbiga Mudaraatka (M) ayaa toddobaadkii hore ee baaritaanka helay taageero dhan 28,2. Halka uu toddobaadkii labaad ey sheegeen iney taageero u hayaan 32,8. Isagoona xisbigu isku celcelin la hoyday 31,1, hoosna u dhacay 1,6.